Maxkamadda Sare ee Somalia oo ku gacan sayrtay Go’aankii Baarlamaanka ka soo baxay Maanta. – Hornafrik Media Network
Maxkamadda Sare ee Dalka ayaa ku adkaysanaysa inaan waxba laga badalin Go’aankii ay gaareen ee ku saabsanaa in Dib loogu laabto Doorashadda 8 Kursi oo Baarlamaanka ka tirsan, kuwaas oo ay Maxkamadda Sare ee Dalku horay u xukuntay in la musuq maasuqay.
Baarlamaanka Somalia ayaa maanta laalay Go’aanka Maxkamadda Sare. waxayna Baarlamaanku oggolaadeen in 8 Xildhibaan ee Kuraastooda lagu muransanaa ay gutaan Waajibkooda Xildhibaanimo. iyadoona Guddoonka Baarlamaanka ay ka hor akhriyeen Xildhibaanadda 5 Qodob oo Xildhibaanku ku wayn karo Kursigiisa, taasoo aan ka mid ahayn Qodobadda ay xeerisay Maxkamadda Sare ee Dalka.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Gud Maxkamadda Sare ayaa lagu sheegay inaysan waxba iska badalin Go’aanadii ay horay u gaareen Xafiiskooda iyo Xafiiska Xeer Illaalinta Qaranka oo iclaamiyay in 8-daas Kursi dib loogu tartamo.
Wasiirka Dastuurka ee Xukuumadda Somalia, ayaa isna sheegay in Go’aanka Baarlamaanka uu yahay mid Sharci Darro ah oo ka hor imaanaya Dastuurka Dalka. Wuxuuna sheegay inay lagama maarmaan tahay in la qaato Go’aanka Maxkamadda Sare ee Dalka.
Hay’adaha Dawladda ayaa u muuqda inay galeen Xiisad dhinaca Sharciga ah iyo Loolan Awoodeed oo u dhaxeeya Masuuliyiinta Dawladda.
Maxaabiis laga keenay Itoobiya oo laga soo dajiyay Muqdisho.